Ebe mara mma nke mara mma njem naanị gị ma nwee ahụmịhe ahụ | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | General, Nduzi, njem
Owu onye owu
Withga njem na ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi bụ ọtụtụ ihe ọchị. Ma ịme ya naanị bụ oke. Na mgbakwunye na ịmara ebe ndị magburu onwe ha na ndị pụrụ iche, ọ na-enyere aka mata onwe gị nke ọma na, na njem ụfọdụ, ọbụlagodi ịbanye na mmụọ nke onwe ya. Maka ebumnuche ndị a niile, anyị ga-ewepụta ebe ise ga - aga gburugburu ụwa ị nwere ike ịnụ ụtọ naanị gị.
Obodo North America kwesịrị ileta ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ gị. Ọ bụ ezigbo ite agbaze nke agbụrụ na mba ndị na-eme ka ọ bụrụ ọdịnala na ọ na-atọ ụtọ. Na mgbakwunye, ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na ya. Nwere ike ịgagharị site na Central Park, ịrị Alaeze Ukwu State, gaa na Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe ma ọ bụ jegharịa na West Village ma ọ bụ Times Square. Echefukwala iri otu n'ime nkịta ha a ma ama na-agba n'okporo ámá.
Agbanyeghị, e nwere usoro ndị ọzọ na-ewu ewu karịa ndị a kpọtụrụ aha. Ọmụmaatụ, si N'elu NkumeNa elu nke Rockefeller Center ị nwere echiche pụrụ iche nke obodo ahụ dịka site na Ọchịchị Alaeze Ukwu. I nwekwara ike zuru ike na Ogige Bryant, na Manhattan, ebe ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla ịchọrọ na ahịa Chelsea ma ọ bụ nke dị na Gotham West.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ kọntinent ọzọ, isi obodo Thailand bụ ebe zuru oke maka ịga njem naanị. Ga-amata ọdịbendị dị iche na nke anyị ma ị ga-ahụkwa omenaala ndị ị na-echetụdịghị n’echiche. Echefula ileta ọtụtụ ụlọ okpukpe ya. Ọmụmaatụ, na-esote Grand Obí, kwesịrị ịhụ na ya, ị nwere ama temple nke emerald Buddha na ntakịrị n'ihu na Wat arun ma ọ bụ Templelọ Nsọ nke Dawn.
Ma ikwesiri ihu ahia nke obodo a, nke juputara na ndi mmadu na ngwa ahia. Onye nke Chatuchak, nwere ihe karịrị puku asatọ; Ogige Damnoen, nke na-ese n'elu mmiri, na Mae Klong, nke ga-eju gị anya karịa n'ihi na ọ dị n'elu ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ. Mgbe ụgbọ oloko rutere, a na-ewedata ya, ka ọ na-agafe, a na-achịkọta ya. N'ikpeazụ, jiri ụgbọ mmiri gafee Osimiri Chao Phraya na ọwa nke esi na ya apụta.
Ọ bụ ezie na ọ bụ obodo dị ala maka ndị ọdịda anyanwụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụta obere ego, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị rahụ na mpaghara Khao mara ụzọ. Ọ bụ ebe jupụtara ọnụ ụlọ mbikọ ọnụ ala, Ogwe na-adịghị agwụ agwụ na ebe ị ga-ahụ ọtụtụ ndị njem na-ama dị ka gị.
Mylọ mylọ Echiche thgha ahụ
Isi obodo nke Republic of Ireland bụ ogbo ebe protagonists nke 'Ulysses' nke Joyce ma nwee mmụọ pụrụ iche. Na Dame Street bụ Lọ Dublin, nke enwere ike ileta. Na, na-esote nke a, akwụsịla ịhụ Katidral St. Patrick. Na ihe ngosi nka dika National Archaeology or Modern Art.
Ọ bụrụ na ị na-amasị ihe omimi, ị nwere ike na-a free eduzi njem site na akụkọ na-emeghị nke obodo, ebe ndị dị otú ahụ dị ka nnukwu ụlọ n'onwe ya, na Nzọụkwụ iri anọ Alley ma ọ bụ obodo ochie Viking nke Wood Quay. N'otu aka ahụ, ụzọ a anaghị akọ eleta ụlọ mmanya kacha ochie na Dublin.
Ma, ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị na-arụ ọrụ abalị, gafere gburugburu temple Bar, ebe ihe ka ọtụtụ n'ime pubs Ahụkarị Irish na jupụtara njem nleta.
Ọ bụ ezie na isi obodo Iceland bụ ebe njem nleta ọhụụ, ọ bụ n'ezie njem bara uru. Obodo nta a nke ihe dị ka otu narị puku na iri puku mmadụ bi na ya nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye gị. Na mpaghara Miöborg ị ga-ahụ ụlọ omebe iwu na oche nke gọọmentị. Ma ọ dị ezigbo nso na Ọbá akwụkwọ ahụ Theaterlọ ihe nkiri mba na katidral ochie. A na-akpọ nke a aha dị ka nke a iji mee ka ọ dị iche na ya Hallgrímskirkja ụka ma ọ bụ katidral nke oge a, ụlọ nke kwesịkwara ịhụ maka ịdị ebube ya na obi ike ya.
N'aka nke ọzọ, na mpụga, n'ebe ọwụwa anyanwụ, ị ga-ahụ ndị Ebe nchekwa Arbaer Folk, ebe i nwere ike imuta banyere omenaala na omenaala ndi Iceland. Kpomkwem na ala ịta ahịhịa nke obodo ahụ, e nwere ọtụtụ ebe na-atụgharị uche na Ugwu Ugwu, ihe ngosi puru iche na uwa. Agbanyeghị, ị ga - anwale mgbe abalị doro anya.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ntakịrị ihe mmegharị, enwere ọtụtụ Ogwe na obodo ahụ na-enye ihe ngosi. N'ime ụfọdụ enwere egwu jazz na egwu ndị ọzọ nke egwuregwu ma ọ bụ mmemme ịgba egwu. N'aka nke ọzọ, n'ihe gbasara gastronomy ahụkarị, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara mma ịnwale ya. Ọ dị ezigbo mma ma ọ dabaghị adaba maka uto Mediterranean. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka shark fermented ma ọ bụ cod isi esi na broth ọkụkọ, ị nwere ike nweta echiche nke ihe anyị pụtara. Better ka mma inwe nkịta dị ọkụ n'aka ndị ha na-ejere ozi Baejarins kacha mma, nke dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Otu n'ime ọwa mmiri na Amsterdam
Ọzọkwa isi obodo nke Netherlands bụ oké ebe ị na-eme njem naanị. Anyị na-emesi gị obi ike na will gwụla ike n’ihi na o nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na ebe ị ga-ekpori ndụ.
Na-amalite na, gị akụkọ ihe mere eme okpu aghaWuru na narị afọ nke iri na asaa, ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Europe nile. Na, gburugburu ya, enwere ọtụtụ ọwa navigable, ya mere amara obodo ahụ dị ka "Venice nke ugwu". Kwa ụbọchị enwere ụgbọ mmiri ndị na-enye gị nlegharị anya na ha. Anyị na-akwado ka ị jiri otu n'ime njem abalị.
Ma otu n'ime nleta a na-apụghị ịgbanahụ agbanahụ na Amsterdam bụ Golọ ihe nkiri Van Gogh. Na, dị ka onye na-emeju, nke nke National Museum, ebe enwere otutu oru site na Rembrandt, Vermeer ma obu Hals. Ga-ahụkwa Royal Obí, nnukwu ifuru ahịa, na Mpaghara uhie ebe bu Old Church na Vondelpark.
Banyere oge ezumike, echefula inwe kọfị na otu n'ime ama ụlọ ahịa kọfị si n'obodo. Na, iri nri ma ọ bụ ịnwe nri, gaa na Leidseplein, otu n’ime ndị na-ekwo ekwo na Amsterdam. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta akwụkwọ aka abụọ, kwụsị na Ogige Spui, ebe enwere ahia zuru oke maka ha.
Na mmechi, ndị a bụ obodo ukwu ise njem nanị. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ, ma ị nwere ike ijide n'aka na ndị ahụ anyị kpọtụrụ aha agaghị emechu gị ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Ise ebe njem naanị